Ngo esifundeni ka zaseCaucasia Mineral Amanzi isakhiwo yezakhiwo esiyingqayizivele kanye Luhambo esemqoka yedolobha - esekisini omkhulu (Kislovodsk). Le ndawo bavakashela hhayi kuphela bendawo njengomkhaya, kodwa futhi abantu abaye beza ukuphumula sanatoriums ka Pyatigorsk, Yessentuki futhi Zheleznovodsk. Yiqiniso, ukuthi le nhlangano namasiko isici esiphawula leli laseStavropol Territory. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngale isekisi ufunde okwengeziwe kulesi sihloko.
engaphezu kwamashumi amane edlule, kwezamahlaya (Kislovodsk) yasungulwa by Gennadiem Mihaylovichem Trahtenbergom, owaqondisa isakhiwo sakhe, bese zokugcina koleminyaka engamatshumi amathathu langaphezulu kuye kwaba umqondisi-non-replaceable lesikhungo. Ngo-2007, le nhlangano kwamasiko wanikezwa igama umsunguli wayo.
Ngo-1973, June 30 ubenomkhankaso grand, futhi kwezamahlaya wavulwa ngikweluleke. Kislovodsk ngenkathi evakashele Cosmonaut futhi iqhawe zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa Pavel Romanovich Popov, nje yena usike iribhoni emnyango ehholo. Ukuvulwa kwalesi sikhungo sekumenyezelwe esifundeni, ngakho izakhamuzi laseStavropol Territory futhi amaholide eziningi ezindaweni wahosha izixuku ukuba isethulo esiyingqayizivele. amathemba awo ngempela elungisisiwe njengoba Umqondisi Kislovodsk Circus umema ukubambisana abaculi angaphandle kanye Soviet eziningi owaziwa. Ngezinye ukusebenza ngamunye izilaleli zaziswa elinde okuthile okusha bese ezingalindelekile.
Futhi naphezu kweqiniso lokuthi kusukela ngaleso sikhathi uye waba engaphezu kwamashumi amane, qembu isekisi ayilokothi iyeke mangaza izilaleli imibukiso esingenakuqhathaniswa futhi ukusebenza ekhexisayo.
Olungaphambili lwesonto udonga lwangaphandle lwesakhiwo ihlukile okukhethekile isitayela yezakhiwo, ngakho kwezamahlaya (Kislovodsk) kuyinto kalula, nemaphosta yayo egqamile futhi ezimibalabala kuyogxilisa yimuphi umuntu oyedwa uyadlula. Arena kulesi sikhungo kwamasiko can ekubukeni okukodwa esikhundleni ezingaphezu kwenkulungwane izibukeli. Interior ngaphakathi esakhiweni ngokwanele acwengekile. Nezitulo ahlelwe embondelene futhi mangaza izilaleli bobukhazikhazi yabo. Ensimini ka kwezamahlaya kuyinto lezitsha lapho nawe ungadla phakathi nekhefu nama-dessert wakhe okumnandi futhi sandwich.
Njalo ngonyaka Kislovodsk enkundleni evakashela amaqembu engaba yishumi lokudala, eziningi zazo kwanikezelwa emikhosini ngamazwe. Phakathi nomlando wawo kwakunemifanekiso abaculi abaningi edume ezifana Boris Vyatkin, Oleg Popov, Mikhail Shuydin nabanye. Okwamanje, yimuphi umfanekiso esekisini e Kislovodsk, ngokuqinisekile zizokhanga zonke isibukeli, ngoba kukhona njalo lilethe somersault ekhungathekisayo kusukela esishwibweni abaculi, Clowns bejabule, abaqeqeshi isilwane nge ezigcemeni zabo abanamakhono nezinto eziningi ezithakazelisayo xaxa.
Lokho nje awuboni kule isekisi emangalisayo - izilwane ezivela emhlabeni wonke, amakamelo eyingqayizivele namasu, zokubhukuda emangalisa lishone. Yingakho le nhlangano evakashela injabulo njengoba abadala, yena kanye nezingane. Ngokusho ababukeli abaningi awela nomkhathi wawo umlingo kanye magic ke emva izinkulumo iba ngcono futhi isikhathi eside uhlala umxhwele izinto kubonakala enkundleni.
Ethandwa kakhulu kule ndawo wamenza uhlelo odlule "Isihlahla sikaKhisimusi e esekisini." Kislovodsk futhi bonke abakhileyo kulo, abakwazi ukuthola ukuthi isitatimende, ku ngokwabo abaye bazizwa iholide egcwele kunothile lezimanga, kugucuka nezipho. Lo mbukiso waqala empini Chime, enkundleni waba ngaphansi okuyinto amaningi njengoba ayisishiyagalolunye Santa Claus ezisekelweni zezingodo. Lokhu New Year Circus e Kislovodsk, akungabazeki, akazithokozisanga kuphela izingane, kodwa nabazali bazo, kuhlanganise, njengoba uhleko elikhulu abayekanga zonke inkulumo ehholo.
Okwamanje, i-engengaphansi elithakazelisayo yohlelo, maduze enkundleni uyokwenza abazalwane Shatirov inkanyezi wangempela ifilimu nomabonakude - ingonyama ngaphandle kukaKhesari. Ngaphezu kwalokho, izilaleli ngeke hit kuphela Luhambo ezinjalo uhlobo salo eRussia ngaphansi kwegama "Moto-sphere", kanye namasu esiyingqayizivele eyenziwa stuntmen "loop ufile" nelithi "Salta mortale". Futhi-ke, akukhona ngaphandle izintandokazi jikelele - funny Clowns. ukumelwa okunjalo emangalisayo omphakathi akambonanga.
On the ukusebenza abaculi abanamakhono of the izikhungo zamasiko wakhula kungekho isizukulwane. Bonke abakhileyo laseStavropol Territory kakhulu othanda lokhu isekisi (Kislovodsk). Izibuyekezo omphakathi uthini ngaye, ukuthi izinhlelo zakhe zikhanga ngezinye izikhathi kusimangaze futhi mangaza izethameli zabo. Libuye elula kakhulu, ngokuvumelana abazali ke, ukuthi phakathi nekhefu, ungathenga ingane yabo into esihlwabusayo ngesikhathi lezitsha, noma uthenge isikhumbuzo noma iliphi ithoyizi.
Izibukeli enjalo nge isekisi abadlali emva izethulo kungenziwa izithombe, kanye ngenkokhelo amahhashi ugibele noma ngendiza ophahleni olungaphakathi lwesakhiwo. Bonke ababekhona kulesi sikhungo, yebo, basutha kakhulu futhi uthole eziningi imizwelo eyakhayo.
Amathikithi kwezamahlaya (Kislovodsk) angathengwa ehhovisi ibhokisi, omunye okuyinto etholakala eduze nomnyango main ezaziphase isakhiwo, futhi ezinye amamitha amahlanu ukusuka esiteshini sesitimela eduze "Narzan" sibhedlela.
Intengo iqala ruble 700 futhi iphela 1200. Izindleko eseduze incike isikhundla wokulalela esekisini. Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu izophela mahhala ebukhoneni isitifiketi sokuzalwa. Kungcono ukuthenga amathikithi kusenesikhathi, ngakho kukhona ithuba ngaphezulu ukuthola isihlalo omuhle ehholo.
Okukhulu kunakho isekisi wesifunda zaseCaucasia Mineral Amanzi itholakala emgwaqeni esimatasa futhi ezinde kunazo zonke edolobheni, kanye nekheli layo ngqo simiswe ngalendlela lelandzelako: laseStavropol esifundeni, 357700 Kislovodsk, Ave Victory, 12.
Repertoire kanye ithikithi izintengo zingatholakala ku izinombolo zocingo elandelayo: 8 (87937) 2-37-19, 8 (87937) 2-96-58, 8 (87937) 2-49-89 noma 8 (928) 013-20-02 .
Ngezimpelasonto, kwezamahlaya inikeza emini nantambama ukusebenza.
Ukuze kusungulwe ngeke kube nzima ukuzifinyelela ezokuthutha zomphakathi. Ungasebenzisa indlela amatekisi esilandelayo: ". Circus" №109, №104 noma №1, okuyinto dovezut ngqo stop Kunokunye ongakwenza ukuze uthole ebhasini №14 futhi phuma ngesikhathi "Umculo School". Kunoma ikuphi, le ndawo akunakugwenywa futhi zonke isakhamuzi sendawo cishe ikutshele ukuthi ukuthole.
Circus of Kislovodsk, ngokuqinisekile unawo amandla ashukunyiswa eliqinile. Yingakho uyakwazi ukunikeza izilaleli zakhe kuphela amakamelo engcono, ugibele okuthakazelisayo, stunts umbukwane nezinye isethulo ezithakazelisayo ezihlukahlukene izinhlobo esekisini ubuciko. Le mibuthano umbukwane kancane ngaphezulu lapho ungabona.
I "indlela imvelo" - yindlela enhle ukuhlola imvelo
Rope epaki at Enea Sky Idolobha: ukuzilibazisa idolobha nemizwelo emisha
Ebusuku club "ukuziphatha okuyisibonelo": ikheli, incazelo, ukubuyekezwa
Salad of daikon. Iresiphi for etafuleni iholide, futhi ngosuku ngalunye.
Kungenzeka yini ukuxhumanisa Slippers esisebenzayo ngixhumane?
SwissGear: ubhaka. nojosaka Urban SwissGear
Indlela ukususa amnyama ebusweni amakhambi abantu